Fanisana 13 - Ny Baiboly
Fanisana toko 13
Ny mpisafo tany nalefa tany Kanaana.
1Niteny tamin'i Moizy Iaveh ka nanao hoe: 2Maniraha olona hisafo ny tany Kanaana, izay omeko ny zanak'Israely. Lehilahy iray isam-pokom-pianakaviana no hirahinareo; aoka izy rehetra ho samy filohany amin'izy ireo avy. 3Dia nirahin'i Moizy avy ao amin'ny efitra Faràna, araka ny didin'ny Tompo, izy ireo; ary samy filohan'ny zanak'Israely avokoa ireo lehilahy rehetra ireo. 4Ireto no anarany: Samoà zanak'i Zekora, avy amin'ny fokon-dRobena; 5Safata zanak'i Hori, avy amin'ny fokon'i Simeona; 6Kaleba zanak'i Jefone, avy amin'ny fokon'i Jodà; 7Igala zanak'i Josefa, avy amin'ny fokon'Isakara; 8Ozea, zanak'i Nòna, avy amin'ny fokon'i Efraima; 9Faltì, zanak'i Rafò avy amin'ny fokon'i Benjamina; 10Gediela, zanak'i Sodì, avy amin'ny fokon'i Zabolona; 11Gadì, zanak'i Sozì, avy amin'ny fokon'i Josefa, fokon'i Manase; 12Amiela, zanak'i Gemalì avy amin'ny fokon'i Dana; 13Sotora, zanak'i Mikaela, avy amin'ny fokon'i Azera; 14Nahabì, zanak'i Vapsì, avy amin'ny fokon'i Neftalì; 15Goela, zanak'i Makì, avy amin'ny fokon'i Gada. 16Ireo no anaran'ny lehilahy nirahin'i Moizy hisafo ny tany. Ozea, zanak'i Nòna dia nomen'i Moizy anarana hoe Josoe.
17Nirahin'i Moizy hisafo ny tany Kanaana izy ireo, nataony hoe: Miakara hianareo, mihazoa ny Negeba, dia miakara amin'ny tendrombohitra. 18Hozahanareo ny tany, ny toetrany, ary ny olona monina ao aminy, na matanjaka na osa izy ireo, na vitsy na maro; 19ny toetry ny tany onenany, na tsara na ratsy, ny toetry ny tanàna onenany, na tsy mimanda na mimanda; 20ny toetry ny tany na lali-nofo na marivo nofo, na misy hazo na tsia. Mahereza tsara ary mangalà amin'ny vokatry ny tany. Voaloham-pahavokaran'ny voaloboka tamin'izay.
21Dia niakatra izy ireo, ka nisafo ny tany hatrany amin'ny efitra Sina, ka hatrany Rohoba, amin'ny làlan'i Hemata. 22Niakatra an'i Negeba izy ireo, ka nandroso hatrany Hebrona, izay nisy an'i Akimàna sy Sizaia ary Tolmaia, taranak'i Enàka. Hebrona dia naorina fito taona talohan'i Tanisa any Ejipta. 23Nony tonga tao amin'ny lohasaha Eskola izy ireo dia nanapaka rantsam-boaloboka iray nisy sampahony, ka roa lahy izy no nilanja an'io tamin'ny hazo lava; naka ampongabendanitra sy aviavy koa izy. 24Noho ny sampahom-boaloboka notapahan'ny zanak'Israely teo, dia nomena anarana hoe Lohasahan'Eskola io fitoerana io.
25Nony afaka efapolo andro dia niverina avy any am-pisafoana ny tany izy ireo. 26Tonga izy, dia nanatona an'i Moizy sy Aarona, mbamin'ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra, tao Kadesy tany an'efitra Faràna. Nanao filazana taminy sy tamin'ny fiangonana rehetra izy ireo ary naneho ny vokatry ny tany taminy. 27Izao no filazana nataony tamin'i Moizy: Nankany amin'ny tany nanirahanao anay izahay. Tany tondra-dronono sy tantely tokoa izany, ary itony no vokatry ny tany avy any. 28Fa ny vahoaka monina any, mahery; ny tanàna, sady mimanda no lehibe; ny zanak'i Enàka aza, hitanay any koa. 29Amaleka no monina amin'ny faritanin'i Negeba; ny Heteana, ny Jebozeana, ary ny Amoreana no monina amin'ny tendrombohitra; ary ny Kananeana no monina amin'ny moron-dranomasina sy ny amoron'i Jordany.
30Fa Kaleba nampangina ny vahoaka ny amin'i Moizy: Andeha isika, hoy izy, hiakatra haka ny tany fa mety ho lasantsika tokoa izy. 31Nefa hoy kosa ireto olona niara-niakatra taminy: Tsy manan-kery isika hananika izany vahoaka izany, fa mahery noho isika izy. 32Sady nataony laza ratsy teo anatrehan'ny zanak'Israely ny tany izay nosafoiny, ka hoy izy: Ny tany notetezinay nosafoina dia tany mandevona ny mponina aminy; ny olona rehetra hitanay tany dia olona avo ranjanana daholo; 33ary hitanay tany koa ny rapeto zanak'i Enàka, taranaky ny rapeto: mova tsy ny valala izahay teo imasony sy teo imasonay. >